Ụbọchị My Pet » Gịnị Women Chọrọ na a Mmekọrịta?
Gịnị Women Chọrọ na a Mmekọrịta?
Dị ka a ọmụmụ ekenịmde ke 2012, 41% mbụ di na nwunye, 60% abụọ alụmdi na nwunye na 73% atọ di na nwunye na United States na-agba alụkwaghịm. Ndị a bụ n'ezie ọnụ ọgụgụ na-egosi na ndị ikom na ndị inyom US na-adọga nwere n'ezie ike mmekọrịta. N'ihi na a na mmekọrịta ike, ma di na nwunye aghaghị ịghọta onye ọ bụla ọzọ mkpa zuru okè. Ya mere, ebe a bụ ihe ụfọdụ ndị inyom anya n'ihi na a mmekọrịta.
Ịhụnanya: I nwere ike na-eche otu dịghị mkpa ka abụ nwanyị anya n'ihi na ịhụnanya, ma anyị apụghị ịga n'ihu na-enweghị banyere “n'anya” dị ka ndị inyom nnọọ n'anya na-eche hụrụ n'anya. Ọ na-apụtaghị na nwaanyị chọrọ nwoke ná ndụ ya na-eme ka ọha na eze na ngosipụta nke ịhụnanya na mgbe etiti, ma dị chọrọ ya na-egosi ịhụnanya ya maka ya subtly site n'omume na okwu dị ka ugboro ugboro ka o kwere omume; mgbe ụfọdụ n'ihu ọha na ngosipụta nke ịhụnanya ọ bụghị ihe ọjọọ ma. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke, ịnọgide na-enwe a ike nkekọ na nwaanyị ahụ ị hụrụ n'anya, ị ga-anọgide na-echetara ya otú ị hụrụ ya n'anya site okwu na omume.
Nche: The njem nke ndụ adịghị mfe n'ihi na onye ọ bụla, irrespective nke okike, ma n'ihi na ndị inyom na njem na-abụkarị ọbụna siri ike karị. Ha na-enwekarị ihu dị iche iche nchekwa mbipụta fọrọ nke nta niile site na ha ndụ, a nnukwu òkè nke a metụtara ha mmekọahụ.
N'ihi na ndị inyom na US, iyi egwu mmekọahụ abụghị ihe ị na-amaghị. A mba na-anọchi anya ekwentị nnyocha e mere na metụtara 612 okenye inyom ekenịmde ke June, 2000 kpughere na ihe fọrọ nke nta, ha niile ihu n'okporo ámá iyi egwu na ụfọdụ ná ndụ. Gburugburu 87% nke American inyom noo n'etiti 18 na 64 afọ chọpụtara nwere ahụmahụ nke majara a nwoke na-amabughị.
Nke a na-elu puru ịlụ harassed doo inyom di n'uko. Ya mere, ha chọrọ onye ha pụrụ ịtụkwasị obi kpam kpam. Women na-atụsi anya mmekọ ndị ga-akpọ ọrụ nke a zuru okè n'echebe na-eme ka ha nwee obi iru ala.
Dị ka onye na ọ bụrụ na ị na-eme nke ọma na nwunye gị nwere ntukwasi-obi, adịghị anya ị ga-ahụ ya oghere gị ma mmekọahụ na n'ụzọ mmetụta uche. Nke a ga-akpaghị aka na-eme ka nkekọ dị n'etiti unu abụọ ọbụna ike.
Egwuregwu: Ọchị dị oké mkpa n'ihi na ndị inyom. Women mgbe anya maka ndị ikom na a bit nke ịkpa ọchị nke ntụgharị. ndị ikom nwere ike ime ka ha na-achị ọchị. Dị ka a nnyocha e mere na rụrụ site MarketTools Inc, 58% inyom chọrọ ibe ha nwere ihe ọchị. Ya mere, a nwoke na-achọ ụzọ mee ka nwunye ya obi ụtọ na afọ ojuju kwesịrị ịgbalị na-na ya wittiest kasị mma.
Nkwanye Ùgwù: Ọ bụ ezie na anyị na-banyere ya ikpeazụ, nkwanye ùgwù bụ na niile puru ihe kacha mkpa inwe a mmekọrịta n'ihi na ọtụtụ ndị na-American inyom. The nnyocha e mere na MarketTools Inc kpughere na 84% ndị inyom na-eche na n'ihi na a mmekọrịta na-aga nke ọma, na-akwanyere si onye dị oké mkpa.
Ị ga-eche “ihe banyere ọdịdị ahụ”? Ee, inyom n'anya nwere di na mmekọ ndị mara mma, ma n'ihi na ha na ọ bụ mgbe otu n'ime ndị mbụ àgwà anya n'ihi na na nwoke.
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị – Ndi Sabotaging Onwe Gị?
Ndenye ọgwụ Anu ulo